गर्भवती महिलाहरु को लागी मोन्टसेराट को भर्जिन लाई प्रार्थना। ? [+ शक्तिशाली! ]
भर्जिनलाई प्रार्थना गर्नुहोस् गर्भवती महिलाहरूको लागि मोन्टसेराट सबै क्याथोलिक चर्च द्वारा सम्मानित संसार, यो उही चर्च थियो जहाँ गर्भवती महिलाहरूको लागि मोन्टसेराटको भर्जिनलाई प्रार्थनाको प्रतिनिधित्वको रूपमा सिर्जना गरिएको थियो। भर्जिन मरियम गर्भमा रहेको जीवनमा गर्भधारण गर्नु भनेको के हो भन्ने कुरा उहाँलाई राम्रोसँग थाहा छ र सम्पूर्ण गर्भधारण प्रक्रियामा मद्दत गर्न सक्दछ।
प्रार्थना एक शक्तिशाली हतियार हो जुन हामीले परिस्थितिको वास्ता नगरी हामीले प्रयोग गर्न सक्दछौं।
पवित्र धर्मशास्त्रले ईश्वरीय हस्तक्षेप अनुरोध गर्नेहरूका लागि ठूलो आश्चर्यकर्मको प्रतिज्ञा गर्दछ।
1 गर्भवती महिलाहरूको लागि मोन्टसेराटको भर्जिनलाई प्रार्थना मोन्टसेराटको भर्जिन को हो?
1.1 गर्भवती महिलाहरूको लागि मोन्टसेराटको भर्जिनमा प्रार्थना
2 के यो कुमारीले मलाई मद्दत गर्नेछ?
गर्भवती महिलाहरूको लागि मोन्टसेराटको भर्जिनलाई प्रार्थना मोन्टसेराटको भर्जिन को हो?
मलाई थाहा थियो कसरी ला मोरेनेटा, पहाडको टुप्पोमा देखा पर्दादेखि, यसले तपाईंको विश्वासको लागि विश्वास गर्ने सबैलाई चमत्कार प्रदान गर्न छोडेको छैन।
यो सन् १1881१ सम्ममा थियो फादर लियो XIII म उनलाई क्याटालोनिया शहरको diocese को एक संरक्षकको रूपमा घोषणा गर्दछु र त्यस दिनदेखि उनको दिन प्रत्येक अप्रिल २ 27 मा मनाइन्छ।
यसको उपस्थितिको लागि, दुई संस्करणहरू परिचित छन्, तर जे कुरा पक्का छ भनेर थाहा छ कि यो छवि हो जुन स्वर्गबाट ​​आएको हो जुन उद्देश्यको साथ हाम्रो विश्वास फेरि एकपटक जान्छ भन्ने कुरा थाहा छ। चमत्कारहरू अवस्थित छन् र उही भर्जिन मरियमको अनुहार छ.
अब जब तपाइँ गर्भवती महिलाहरूको मोन्टसेराट संरक्षकको भर्जिन जान्नुहुन्छ, अब प्रार्थना गर्नुहोस्।
मेरी, सुन्दर मायाकी आमा, नासरतकी प्यारी केटी, तिमी जसले प्रभुको महान्ताको घोषणा गर्‍यौ र "हो" भन्दै थियौ, आफैंलाई हाम्रो मुक्तिदाता र हाम्रो आमा बनायौ: आज प्रार्थना गर जुन म तिमीलाई गर्छु: मेरो भित्र एक नयाँ जीवन बढ्दै छ: एक सानो जो खुशी र खुशी, चिन्ता र डर, आशाहरु, मेरो घर लाई खुशी ल्याउनेछ।
यसको ख्याल राख्नुहोस् र यसलाई सुरक्षित गर्नुहोस् जब म यसलाई मेरो छातीमा बोक्छु।
र त्यो, जन्मको खुशीको क्षणमा, जब मैले उनीहरूको पहिलो आवाजहरू सुनें र तिनीहरूका सानो हातहरू देखे, म सृष्टिकर्तालाई यो उपहारको आश्चर्यकर्मको लागि धन्यवाद दिन सक्छु जुन उहाँ मलाई दिनुहुन्छ।
त्यो, तपाईंको उदाहरण र मोडेल अनुसरण गर्दै, म साथ दिन र मेरो छोरा बढ्न हेर्न सक्नुहुन्छ।
मलाई मद्दत गर्नुहोस् र मलाई शरणस्थानको लागि आश्रय खोज्न प्रेरित गर्नुहोस् र, उही समयमा तपाईंको आफ्नै मार्गहरू लिनको लागि सुरूवात।
साथै, मेरी आमा, विशेष गरी ती महिलाहरू जो यस क्षण एक्लै सामना गर्छन्, समर्थन बिना वा प्रेम बिना।
उनीहरूले बुबाको प्रेम महसुस गरून् र पत्ता लगाउन सक्छन् कि संसारमा आउने हरेक बच्चाहरू आशिष्‌ हुन्।
उनीहरूलाई थाहा दिनुहोस् कि बच्चालाई स्वागत गर्न र हुर्काउनको लागि वीर निर्णय लिइएको छ।
हाम्रो मिठो प्रतीक्षा महिला, तिनीहरूलाई तपाईंको प्रेम र साहस दिनुहोस्।
तिमीलाई मन पर्यो? गर्भवती महिलाहरूको लागि मोन्टसेराटको भर्जिनलाई प्रार्थना?
ती क्षणहरूमा जहाँ उनी गर्भवती छिन् धेरै चोटि मिटर पीडाको विचारले भरिन्छ कि उनीहरू के गर्छन् परिवर्तन गर्दछन् paz y शान्ति तपाईसँग यस्तो समयमा हुनुपर्दछ किन अस्थिरता आउँदा प्रार्थनाहरू शरण स्थान बन्न सक्छन्।
अब गर्भवती महिलाको भर्जिनलाई प्रार्थना गर्नुहोस्!
जब उनीलाई राम्रो आमाको रूपमा सहयोगका लागि सोधिन्छ, उहाँ हाम्रो कलमा आउनुहुनेछ।
यसैले तपाईको अटुट विश्वास हुनुपर्दछ कि हामी तपाईको सहयोग जहिले पनि सहयोगी हुन्छौं।
केही फरक पर्दैन यदि यो हाम्रो लागि वा साथी वा परिचितका लागि हो, प्रार्थना यो विश्वास र आत्मा बाट गरेको छ भने यो सधैं शक्ति छ।
म आशा गर्दछु कि तपाईले गर्भवती महिलाहरूको लागि मोन्टसेराटको भर्जिनको लागि शक्तिशाली प्रार्थना मनपराउनु भयो।
ग्वाडालुपेको भर्जिनका लागि प्रार्थना